रामधन राई सोलु एफ.एम ८ आश्विन खोटाङ ः खोटाङमा भूकम्पपीडित लाभग्राहीहरुका लागि ‘एक घर–एक सीपमूलक रोजगारी’को अवधारणसहित एकीकृत नमुना वस्ती निर्माण योजना सुरु गरिएको छ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१५ विजयखर्कका भूकम्पपीडित लाभग्राहीका लागि सोही स्थानमा ‘रामनाथ नमुना एकीकृत वस्ती’को सिलन्यास भईसकेको छ । स्थानीय भूकम्पपीडतहरुको पहलमा...
जुलुस सहित मनाइयो ओलखढुङ्गामा संविधान दिवस ।
सोलु एफ. एम आश्विन ३ सोलुखुम्बु ः ओखलढुंगामा विभिन्न कार्यक्रम गरेर संविधान दिवस मनाइएको छ । चौथो संविधान दिवस सदरमुकाममा वृहत बाजागाजा सहितको जुलुससहित मनाइएको हो । दिवसका अवसरमा निकालिएको जुलुस जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुंगाको सभाहलमा पुगी सभामा परिणत भएको थियो । जिल्ला सदरमुकाम रहेका सगरमाथा जनता मावि, जाल्पा मावि लालीगुँरास इङलिस स्कुल लगायतका विद्यालयका एक हजार...
कृर्षकलाई आत्म निभर बनाउन प्रशिक्षण ।
सोलु एफ.एम भाद्र २५ खोटाङ्को केपिलासगढी गाउँपालिकाको वडा नं ६ दिप्रुङमा केराउ खेति सम्बन्धि तालिम सम्पन भएको छ । रावा हरियालि कृर्षि सहकारीको आयोजनामा १ दिने कार्यक्रम सम्पन भएको हो । वडाका ५० जना कृर्षकको सहभागितामा रहेको सहकारीका व्यवस्थापक भोलानाथ तिमिल्सीनाले जानकारी दिनुभयो । वडा अध्यक्ष अशोक राईको प्रमुख आथिथ्यमा भएको कार्यक्रममा केराउ खेतिको विषयमा...
ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा १ जनाको ज्यान गयो ।
सोलु एफ.एम भाद्र २० खोटाङ् दिक्तेलबजारको अल्छेढुङ्गाबाट रत्नपार्कतर्फ जाँदै गरेको ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा १ जनाको ज्यान गएको छ । को २ त १३८८ नम्बरको खाली ट्याक्टर दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–२ अल्छेढुङ्गाको जिरो प्वाइन्ट नजिक दुर्घटना हुँदा ट्याक्टर चालक २२ वर्षीय प्रकाश राईको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । ट्याक्टर सडकबाट करिब १० मिटर तल खस्दा...
आगलागि पिडित मगरलाई आर्थिक सहयोग ।
सोलु एफ.एम भाद्र १७ ओखलढुगांको जन्तरखानी पात्लेको आगोलागि पिडित मगरलाई रहात रकम प्राप्त भएको छ । गत भाद्र २ गते घरमा आगलागी भएकार नष्ट भएका कृष्ण बहादुर मगरको परिवारलाई आइतबार नगद सहयोग हस्तान्तरण गरिएको हो । अग्नी पिडित मगरलाई सिद्धिचरण नगरपालिका ६ तल्लो मैदाने टोलका स्थानियद्धारा सकंलीत नगद १९ हजार ५ सय रुपैया आइतबार हस्तान्तरण गरिएको स्थानिय केशर मगरले...
एक वर्षमै ९० प्रतिशत बाचा पुरा गरेको अध्यक्ष निरौलाको भानाइ ।
सोलु एफ.एम भाद्र १७ खोटाङको ऐँसेलुखर्क गाउँपालिका प्रमुख विश्वनाथ निरौलाले आपूmले बोलेको ९० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको दावी गर्नुभएको छ । निर्वाचनको समयमा गरिएका प्रतिबद्धताहरु शत प्रतिशत पुरा हुन नसकेको भएपनि जनताको सेवा गर्न आएकाले ५ वर्ष भित्र उत्कृष्ट काम गर्ने बताउँनुभयो । आपूmले धेरै ठुला आश्वासन नदिएको र दिएका आश्वासन पुरा गरिरहेको गाउँपालिका प्रमुख...
वैदेशिक राजगारीको क्रममा ज्यान गुमाएका परिवारलाइ ब्लडमनी ।
राम धन राई,सोलु एफ एम,साउन २७ खोटाङ–वैदेशिक राजगारीको क्रममा साउदीमा ज्यान गुमाएका तीन जना खोटाङबासीको परिवारका लागि ब्लडमनी आएको छ । १८ जना मृतक कामदारको परिवारलाई नेपाली दूतावासले पठाएको ब्लडमनी पाउनेमा खोटाङको तीन परिवार रहेको उल्लेख छ । अदालतको फैसला अनुसार ब्लडमनी पाउनेमा मृतक रामनाथ राई, देवराज राई र मृतक सन्तोष खत्रीको परिवार रहेका छन् । रामनाथको...
दुम्सी मार्न जादा एक जनाको ज्यान गयो ।
राम धन राई,सोलु एफ एम,साउन २७ खोटाङ–दुम्सीलाई धुवा लगाउदा खोटाङमा एक जनाको ज्यान गएको छ । जिल्लाको खोटेहाङ गाउँपालिका–८ सिम्पानीकी ४५ वर्षीया सरिता तामाङको दुम्सीलाई धुवा लगाउने क्रममा निश्सासिएर मृत्यु भएको हो । छोराछोरी सहित शनिबार बिहान दुम्सी मार्न हिडेकी सरिता स्थानीय डिउखोलास्थित ओढारमा मृत फेला परेकी हुन् । आमासँगै ओढारभित्र पसेका उनका ११ वर्षीय छोरा...
त्रि–धार्मिकस्थल हलेसीको आम्दानी नगरपालिकाको मातहतमा ।
रामधन राई÷सोलु एफ एम, साउन–९, खोटाङ ः खोटाङस्थित ऐतिहासिक त्रि–धार्मिकस्थल हलेसी मन्दिरको आम्दानी नगरपालिकाको मातहतमा ल्याउने निर्णय गरिएको छ । प्रसिद्द हलेसी मन्दिरको भेटीपाती लगायतका आम्दानीलाई हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको मातहतमा ल्याउने निर्णय गरिएको हो । हिन्दु, बौद्ध र किरात धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्रका रुपमा रहेको हलेसीको आम्दानीलाई पारदर्शी...
खाँडीबाट फर्किएर पोखरीमा रमाउँदै
रामधन राई÷ सोलु एफ एम, साउन–८, खोटाङ ः वैदेशिक रोजगरीको कुनै विकल्पै नसोँचेका खोटाङ खाल्लेका रबिन राई घरमै बार्षिक पाँच लाख बढी कमाई गर्न भनेर ब्यवसायिक माछा पालन सुरु गरेका छन् । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–४ खाल्लेका युवा रबिनले विदेशमा गर्ने जति मेहनत नगर्दा पनि गाउँमै मनग्गे आम्दानी हुने पत्तो पाएपछि एकाएक ब्यवसायिक माछा पालन गर्न कस्सिएका हुन्...
युएईमा खतरनाक ट्रक दुर्घटनामा परेको युवा भाग्यले बाँचे
रामधन राई÷ सोलु एफ एम, खोटाङ साउन–८, युएईको सडकमा भयानक ट्रक दुर्घटनमा परेको खोटाङ खार्मीको योगेश राई भाग्यले बाँचेका छन् । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा केही महिना अघि युएई पुगेका दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–११ खार्मी कुम्देलका युवा योगेशलाई आवुधबीमा साता दिन अघि ट्रकले ठक्कर दिएकोमा हाल सकुशल रहेको आफन्तले जनाएका छन् । नेपालमा रहेका आफन्तलाई...
कुन प्रदेशले कति बजेट बिनियोजन ग¥यो ?
सोलु एफ एम असार १, २०७४ मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै सातै प्रदेशले आज आगामी वर्षका लागि बजेट ल्याएका छन् । सातै प्रदेशका सभा बैठकमा पहिलोपटक बजेट पेश गरिएको हो । प्रदेश एक नम्बर प्रदेश सरकारले आगामि आर्थिक २०७५र७६ का लागि ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा पेस गरेको छ । प्रदेश सरकारले कुल बजेट मध्ये पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख अर्थात ५१ दशमलव ५...
ओखलढुंगामा भिजन आईडल सुरु
ओखलढुंगा, २६ जेठ । ओखलढुंगामा भिजन आईडलको दोस्रो संस्करण सुरु भएको छ । स्थानीय स्तरका युवाहरुमा लुकेर रहेको प्रतिभाको विकास गर्ने उद्धेश्यले गतवर्षबाट थालिएको भिजन आईडलको दोस्रो संस्करण शनिवारबाट सुरु भएको हो । आईडललाई हरेक वर्ष निरञ्तरता दिने योजना अनुसार यसवर्ष सिजन २ सुरु गरिएको भिजन नेपालका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद न्यौपानेले बताए । ‘साहित्य र कलाको...
संखुवासभामा जिप दुर्घट्ना हुँदा गाउँपालीका अध्यक्ष सहित ६ जनाको मृत्यु ।
पुस ३०, २०७४ संखुवासभा– संखुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारीबाट भोटखोला गाउँपालिकाको हटियामा पर्ने दोभानतर्फ गएको जीप दुर्घटना हुँदा छ जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घट्नामा परि मकालु गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्ग कटुवालसहित ६ जनाको मृत्यु भएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज जोशीले दिनुभएको जानकारी अनुसार भोटखोला खोला गाउँपालिका ३ मा पर्नेे सामाटार भन्ने स्थानमा जीप...
हलेसीका अग्नी पीडितलाई सहयोग गर्ने रक्षामन्त्रीको आश्वासन
पुस–२३, २०७४ रामधन राई÷ सोलु एफ एम, खोटाङ, रक्षामन्त्री भिमसेनदास प्रधानले खोटाङस्थित हलेसीका आगलागी पीडितलाई प्राथमिकतामा राखी सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ । रक्षामन्त्री प्रधानले हिन्दु, बौद्घ र किरात समुदायको आस्थाको केन्द्र त्री–धार्मिक एबं पर्यटकीयस्थल हलेसीमा पुस १८ गते राती भएको आगलागीबाट प्रभाबित क्षेत्रको निरीक्षण गर्दै यस्तो आश्वासन दिनुभएको हो...